You maara nkọwa na ụdị nke eriri pụrụ iche? - Akụkọ - Dongguan Jianxing Outdoor Products Co., Ltd.
Ngwongwo na eriri puru iche bu uzo nke ihe omuma nwere ihe puru iche na ihe puru iche, nke ha na ndi ozo na eriri ndi nwere otutu buru ibu na uzo di iche iche. Ha nwere njirimara nke ọdịnaya dị elu nke teknụzụ, ọnọdụ ojiji siri ike, obere ogbe, na uru bara uru dị elu. A na-ejikarị ihe ọhụrụ, ihe owuwu ọhụrụ, usoro ọhụrụ na usoro nhazi ọhụụ eme ihe. Enwere ike kewaa wires na eriri ndị a n'ime edemede anọ ndị a:
Akwa okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ waya na eriri
A na-achọ wires na eriri ndị na-eguzogide ọgwụ dị elu na mbara igwe, ngwaahịa na-agagharị, ike, ígwè na nchara, nchara na-enweghị ọla, nyocha mmanụ, na igwe eletriki. Ogologo oge na-aga n'ihu na-arụ ọrụ okpomọkụ 125 degrees, 135 degrees, 150 degrees, 180 degrees, 200 degrees, 250 degrees na 250 degrees loke elu waya na-eguzogide waya na eriri, nke a na-ejikarị eme ihe bụ polyolefin metụtara njikọta cross, roba silicone, fluororesin, polyamide Waya na eriri dika imine, mica, magnesium oxide, wdg.
Waya na eriri nwere nzube pụrụ iche na nhazi
1. Obere eriri inductance
E nwere oke okwukwo na ike na-esighi ike. Nke a bụ eriri ikuku dị ala maka mmiri dị ike. Ejiri eriri USB a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ. A na-eji ya maka ijikọ ụdị igwe ọrụ ịgbado ọkụ niile, igwe ịgbado ọkụ na ihe mgbanaka ọkụ. Ọ nwere usoro dị mfe na nke ezi uche dị na ya, nnukwu mmiri jụrụ oyi, na enweghị mgbochi. Ihe ndị dị ka igbochi na njedebe ugbu a, ezigbo ọkụ ọkụ, na ndụ ogologo ndụ.ã type cabledị eriri USB nke adịghị ala na-agụnye eriri na njikọ ya na eriri USB, eriri ahụ nwekwara nke dị mma eriri igwe na eriri USB na-adịghị mma arụnyere na ọkpọ roba dị na mpụta.
2. Obere igwe nkpu
N'okpuru ọrụ nke ihe ndị dị na mpụga dịka ikwe, vibration, mmetụta, na mgbanwe okpomọkụ, eriri nke mgbaàmà mgbapụta ya nke eriri n'onwe ya na-erughị 5mV ka a na-akpọ eriri mkpọtụ dị ala, nke a na-akpọkwa eriri akụrụngwa na-enweghị ihe mgbochi. A na-eji ya maka mmụba nke obere mgbama n'ọtụtụ ebe dịka ụlọ ọrụ, ọgwụ na nchekwa mba. Enwere eriri ndị nwere obere mkpọtụ, polọthylene nke nwere obere mkpọtụ, eriri igwe anaghị anabata ụda olu, ụzarị ọkụ na-eguzogide ọgwụ na-adịghị ala, eriri capacitance na obere mkpọtụ, eriri igwe hydrophone, eriri mmiri na obere mkpọtụ, na ọtụtụ ụdị eriri ndị ọzọ.
Eriri arụmọrụ na eriri
1. Fluorine nwere resin njide onwe onye na nkwụsi ike 135 ogo kpo oku USB
Ngwurugwu nke na-achịkwa njide onwe onye nke 135 nke mejupụtara polyvinylidene fluoride (PVDF) / fluororubber alloy / carbon black composite compound. Ọnọdụ ọkụ ya dị iche, na-egosi ogo dị iche iche nke PTC conductivity na conductivity kwụsie ike. Nke a bụ n'ihi na ogo nke crystallinity na ụdị crystalline nke matrik ahụ na-emetụta ọsọ ọsọ dị iche iche maka mkpuchi.
2. Eriri electroluminescent
Igwe a na-akpọ electroluminescent bụ ngwaahịa kachasị ọhụrụ na mpaghara ngosi ngosi mba ụwa. Ọdịdị ya dị ka wires nkịtị na eriri. A na-eme elu elu nke uwe aka na-acha ọkụ ọkụ. Ọ na-ewepụta na-enweghị mmụba ọkụ ọ bụla mgbe ọ na-arụ ọrụ, yana ike ya na-eme bụ naanị 50-60% nke ọkụ ọkụ. , 20-30% nke eriri ọkụ, 1-5% nke neon ọkụ; a na-eji ngwaahịa ndị dị otú ahụ eme ihe n'ọtụtụ ebe, na -emepụta oge ọhụụ nke ịchekwa ike, gburugburu ebe obibi, yana ọkụ ngosi ọkụ.
The cable that can pass UL's highest flame retardant grade standard is USB CMP. The three companies Dubang, Lucent and BICC have done a lot of burning tests on wires and cables, and researched it out that a thin layer of FEP (ie F46) sheath is squeezed out of ordinary cables to meet this requirement.
N'ikwu okwu n'ozuzu, obere anwụrụ ọkụ na ihe na-enweghị halogen bụ polyolefin, nke nwere calorie dị elu ma nwee oke ọkụ. Ya mere, a ga - agwakọta ha na ihe eji eme mmiri ka ha wee nwee ike igbochi ọkụ ọkụ ya, mana mmiri maka hydration Mgbe ike gwụrụ, ọ ga - ebute oke ọkụ. Otú ọ dị, okpomọkụ nke FEP dị obere, ọ gaghị ere ọkụ ma ọ bụrụ na ọkụ.